Iwo akanakisa mawiricheya embwa kuti avandudze kufamba kwadzo | Imbwa dzeNyika
Zvigaro zvembwa dzakakasharara zvinobatsira zvikuru kana imbwa yako ichida kubatsirwa kufamba., zvichida nemhaka yokuchembera, kupora pakuvhiyiwa kana kuti nemhaka yokurwara. Chero zvazvingava, ivo vanobatsira zvikuru, kunyange zvazvo tinogona kunzwa takarasika kana tichitenga imwe.
Nokudaro, Isu takagadzirira chinyorwa ichi chakatsaurirwa kune mawiricheya embwa dzatichataura nawo pamusoro pemhando dzakakurudzirwa, pamwe chete nemazano paunotenga imwe nemhando dzayo dzakasiyana. Muchidimbu, tichaedza kugadzirisa kusava nechokwadi kwese kwatinogona.
KAJILE Two Blue Wheels ...
Ortocanis Wheelchair ...
HobeyHove Stroller ye...
Trailers Trolleys Sachigaro ...
Cora Pet Dog...
1 The best wheelchair for imbwa
1.1 Very comfortable adjustable wiricheya
1.2 Wheel chair yembwa diki
1.3 Wheel chair yembwa huru
1.4 Dhonza bhegi
1.5 Kudzivirira harness
1.6 Mavhiri mana
1.7 Inogadziriswa aluminium ramp
2 Usati watenga wiricheya
2.1 Zviratidzo zvekutarisa
2.2 Shanyira kuna vet
3 Ko mawiricheya embwa ndeechii?
4 Mhando dzemawiricheya embwa
4.2 Kusimudza tambo
5 Mazano ako nembwa yako
5.1 Sarudza chigaro zvakanaka
5.2 Gadzirira imba yechigaro
5.3 Rovedza imbwa yako
6 Kupi kunotenga imbwa wiricheya
The best wheelchair for imbwa
Very comfortable adjustable wiricheya
Fditt Wheelchair ...
Iyi wiricheya ndeimwe yeakanyanya kugadzikana iwe yauchawana kune imbwa yako. Yakagadzirwa nealuminium, iyo inoita kuti ive yakajeka, uye ine mutsara wetambo dzaunogona kugadzirisa nawo kuitira kuti imbwa yako iwane makumbo ayo ekumashure akabatwa zvakanaka. Iyo yakashata ndeyokuti iyi modhi haina hukuru, saka iwe uchafanirwa kuyera chinhambwe kubva pahudyu kusvika pahudyu yemhuka, pamwe nekureba kwayo kusvika kune bum, kuti uone kana ukuru hwakagadziriswa zvakanaka kana kwete. Uyezve, inosanganisira tambo yemahara!
Wheel chair yembwa diki
Chekutanga kucherekedza nezve wiricheya iyi ndechekuti imodhi yakanyatsogadzirirwa imbwa diki dzinosvika gumi kilos. Kune mamwe ese, anogadzirwa neakareruka kwazvo asi anoramba aruminiyamu machubhu. Mavhiri ekumashure anogona kugadziriswa kune zvakasiyana-siyana, uyezve, inewo mabatiro maviri emakumbo ekumashure. Kupedzisa, ihwo muenzaniso wakanaka kwazvo mupepuru.
Wheel chair yembwa huru
Uyu mumwe muenzaniso wemawiricheya embwa, kune rumwe rutivi, unokodzera imbwa huru kusvika ku30 kilos. Inopikisa zvakanyanya, inogadzirwawo nealuminium uye ine maviri anonakidza anotsigira makumbo ekumashure ane antifriction kudzivirira kuvhuvhuta. Mavhiri anogadzirwa nerabha, saka akakodzerawo kutora zviri nyore pakufamba nekuda kwekupikisa kwavo kukuru.
derYEP Dhonza bhegi ...
Mabhegi ekukweva chinhu chinonakidza uye chakanyanya kugadzikana chekuti imbwa yako iende nayo kumba uye kudzivirira kukwesha ronda kana kuti kungodzivirira makumbo emusana kubva pasi. Kuvhiya kwacho kuri nyore, nekuti ine bhegi renylon rine mesh inofema uye harness kuitira kuti irege kudonha nekushandiswa. Mukuwedzera, iwe unogona kusarudza pakati pehukuru hwakasiyana iyo inonyatsokodzera chipfuyo chako.
Mabhanhire ekudzivirira ndiyo imwe nzira kune mawiricheya. Iwo akafanana zvakanyanya neakajairika harness, iwo chete anosanganisira rudzi rwemubato unosimudza imbwa uye uchimubatsira kufamba, achimubvisa kushushikana kwaanoita kumashure, saka zvinokurudzirwa kune imbwa dziya dzisina kurasikirwa zvachose. pamakumbo eshure. Iyi inouya muhukuru huviri, M uye L, uye kunyangwe ichiti chakati netsei kupfeka, inovaitira zvakanaka uye inovabatsira zvakanyanya.
Pssopp Wheelchair ...
Imwe modhi yewiricheya yembwa, zvisinei, iyi ine mavhiri mana. Inokurudzirwa kumhuka kusvika ku8 kilos, ine tambo dzakawanda dzinogadziriswa kuti dzigadzirise kune zvinodiwa nembwa yako uye inogadzirwa nealuminium, iyo inoita kuti ive yakareruka (chaizvoizvo, chigadzirwa chacho chinorema anenge makirogiramu maviri).
Inogadziriswa aluminium ramp
TRIXIE Imbwa Ramp
Uye isu tinopedzisira tine chigadzirwa icho, Kunyangwe kusave wiricheya pachayo, chinhu chinofanira kuverengerwa kana imbwa yedu ichida imwe: rampu.. Izvi zvinogadzirwa nealuminium uye jira rakapfava uye risingatsvedze, mukuwedzera, rinochinjika kune akasiyana marefu kubatsira imbwa yako kukwira masitepisi kana kunyange sofa.
Usati watenga wiricheya
Ehe saizvozvo, munhu haakwanise kutenga wiricheya asina kutanga akurudzirwa nachiremba, sezvo isiri iyo inokurudzirwa yekushongedza imbwa dzine hutano. Saka tinofanira kutanga tive nechokwadi chokuti unoida.
Kutanga Kwazvose Pane nhevedzano yezviratidzo zvaunofanira kuziva uye izvo zvinogona kuratidza kuti imbwa yako ingangoda imwe rubatsiro kuti ifambe, semuenzaniso:
Matambudziko kana famba
Inonanzva majoini yemakumbo (ankles ...)
Kuoma mitezo zvakakwana kana zvishoma
Izvo zvine kuoma kumira
Shanyira kuna vet
Kana tikaona chimwe chezviratidzo zviri pamusoro apa, ichava nguva yekuendesa chipfuwo chedu kun’anga. Ikoko ivo vachatiudza kuti kurasikirwa uku kwekufamba kungave kunokonzerwa nei nekuda kwekuongorora kwemuviri uye miedzo yakasiyana-siyana, iyo inogona kusanganisira, pakati pevamwe, X-rays uye kuongororwa kweropa, uye zvatinogona kuita nezvazvo. Imwe yemikana ndeyekuti vanokurudzira wiricheya.
Muchidimbu, Chinhu chakakosha ndechekuti isu hatishandise wiricheya kana vevet vasati vakurudzira, ndiani achaziva mamiriro embwa yedu zvakakwana uye achaziva kuti anotikurudzira sei kugadzirisa.
Ko mawiricheya embwa ndeechii?
Sezvaunogona kufungidzira, mawiricheya embwa haisi chishongedzo icho munhu anotenga kunakidzwa, asi chinopindura kune chakanyanya chinodiwa, kana. makumbo emusana wemhuka yako haigoni kana kuti haifaniri kufamba. Izvi zvinogona kuva nekuda kwezvikonzero zvakawanda:
Pakutanga, imbwa inogona kuva nezvimwe degenerative chirwere kumusana zvinoita kuti urasikirwe nekufamba mumakumbo ekumashure. Izvi zvinogona kutova mamiriro akagarwa nhaka anoita kuti utambure kubva kumashure kwegumbo kushaya simba. Zvimwe zvirwere zvinogona kukonzera, semuenzaniso, bundu kana chirwere cheshuga.
La age Inogona kuva chimwe chinhu chehuremu icho imbwa inoda rubatsiro rwewiricheya. Semuenzaniso, inogona kukonzera tsandanyama atrophy, arthritis ...
Pakupedzisira, wiricheya inogona kudikanwa kana imbwa yako iri kupora kubva kumwe kuvhiyiwa kumashure.
Mhando dzemawiricheya embwa
Kune marudzi akasiyana-siyana emawiricheya embwa anogona kunyatsogadziriswa kune zvaunoda, zvichida tichifunga kuti ichava rubatsiro rwechigarire kana kuti rwechinguvana.
Chiwiriri chemhando yepamusoro chinowanzoita machubhu maviri esimbi ane mavhiri maviri iyo inoiswa kumashure kwembwa ine mutsara wetambo dzekufambisa makumbo ekumashure kubva pasi uye kuchengetedza mavhiri kumuviri wemhuka. Ndivo vanonyanya kusununguka kufamba. Mukuwedzera, vanobvumira imbwa kuti isunungure yakadzikama, uye inogona kutora maminitsi gumi nemashanu kusvika paawa.
Imwe mhinduro, kunyangwe ichinyanya kuomera imbwa nemuridzi, ndeyekusimudza machira. Idzi imhando yebhegi rine mibato inobvumira kuchengeta musana wembwa uri mudenga kuitira kuti ifambe zviri nani. Uyewo, kune marudzi akasiyana-siyana emagetsi, zvichienderana nezvinodiwa nembwa uye kukura kwayo.
Pakupedzisira, madhiri acho akanakira kutenderera nemba, kunyange zvazvo zvisingakurudzirwi kuvabudisa kunze, sezvo vanozoguma varasika netsvina. Ibhegi rakachengetedzwa mumatumbo emhuka inobvumira kuti ifambe chete nemakumbo epamberi, ichichengetedza shure kwekudzivirira kubva pasi.
Mazano ako nembwa yako
Kana imbwa yako ichida kutakura wiricheya, chokwadi iwo mamiriro matsva kwazvo kwatiri tose. Ndosaka iyi nhevedzano yematipi inogona kubatsira:
Sarudza chigaro zvakanaka
Pakusarudza chigaro, kunyanya kana chiri chekutanga, funga zvinodiwa nembwa. Zvinogona kubatsira, panguva ino yekutanga, kuenda kuchitoro chemuviri kana chiremba wemhuka anoziva kutipa zano nenzira yakasarudzika. Kune rumwe rutivi, zvinokurudzirwa zvikuru kuti, kunyange kana iri zvinhu zvinodhura, usarega mari uye uchifunga nezvekunyaradza kwembwa.
Gadzirira imba yechigaro
Sezvakaita vanhu, imbwa dzichada imba yadzinogara kuti dzinyatsoenderana nemamiriro adzo matsva. Naizvozvo, inogona kunge iri zano rakanaka kwazvo kuisa ramps kuitira kuti iwe ugone kukwira nyore nhanho kana kunyange sofa. Iwe unogona kazhinji kuwana zvinhu izvi muzvitoro zvakakosha uye paAmazon.
Rovedza imbwa yako
Usatarisira kuti mhuka ichajairira wiricheya husiku. Semazuva ese, iwe unozofanirwa kuchinjika kuti uchinje zvishoma nezvishoma. Kuti uite izvi, unofanira kumudzidzisa kutakura chigaro, asiwo kuti ajaire kuzvisunungura paanenge akapfeka.
Kupi kunotenga imbwa wiricheya
Kune nzvimbo dzakawanda kupfuura dzinosangana neziso umo tinogona kutenga chimwe chezvigadzirwa izvi. Semuenzaniso:
Amazon Ndiyo imwe yenzvimbo kwaunogona kuwana rudzi urwu rwechigadzirwa. Tichawana akati wandei akasiyana modhi, kunyangwe iyo yakaderera ndeyekuti isu hatigone kuvaona isu pachedu. Chinhu chakanaka, zvisinei, ndechokuti mutemo wavo wekudzoka wakanaka kwazvo, saka kana chigadzirwa chacho chisingatitenderi isu tinogona kuchidzorera nyore nyore.
En nyanzvi dzemapeji ewebhu seTiendaAnimal neKiwoko tichawanawo mhando yezvigadzirwa. Kuve nehunyanzvi zvishoma, tinogona kuvimba nerubatsiro rwemunhu, rwunogoneka kuti tiwane chigadzirwa chatiri kutsvaga nenzira iri nyore.
Chekupedzisira, uye zvakanyanya kukurudzirwa kana iwe uchinzwa kurasika zvishoma kana uchitsvaga chakanyanya chigadzirwa, ndidzo matende emapfupa emhuka sezvo Ortocanis. Ndivo vane zvakawanda zvakasiyana-siyana, kunze kwekuva nemhando huru.
Mawiricheya embwa anobatsira zvikuru kune idzo mhuka idzo, nekuda kwezera kana kurwara, dzinonetseka kufamba. Tiudze, imbwa yako inoda chero? Wakamboedza chimwe chezvigadzirwa zviri pamusoro here? Chii chawakasangana nacho?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Iwo akanakisa mawiricheya embwa kuti dzivandudze kufamba kwadzo